दशैँ नजिकिदै गर्दा काठमाडौंमा लु,ट,पा,ट बढ्यो, सिक्री र पैसा लु,टि,यो – Dainik Sangalo
दशैँ नजिकिदै गर्दा काठमाडौंमा लु,ट,पा,ट बढ्यो, सिक्री र पैसा लु,टि,यो
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, आश्विन १५, २०७८ समय: १३:३२:३०
प्रहरीले काठमाडौंमा सुनको सिक्री र नगद लु,ट्ने, तीन जनालाई प,क्रा,उ गरेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका–२६ सरकारी धारा बस्ने गोरखाको अजिरकोट गाउँपालिका–४ घर भएका २६ वर्षीय अजय रेग्मीको १.५ तोलाको सुनको सिक्री र नगद ८ हजार रुपियाँ टोखा नगरपालिका–९ गोँगबु शिवमन्दिर नजिकबाट बिहीबार बिहान लु,ट,पा,ट भएको थियो ।
रेग्मीले घाँटीमा लगाएको सुनको सिक्री र नगद अपरिचित ३ जनाले लु,टी फरार भएको भन्ने खबर प्राप्त हुनासाथ महानगरीय प्रहरी प्रभाग गोंगबुबाट खटिएको प्रहरीले खोजी गर्ने क्रममा शंकास्पद ३ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ ।
चाड पर्वका अवसरमा महानगरिय प्रहरी परिसर काठमाडौंले बिशेष सुरक्षा योजना लागु गरेपनि चो,री र लु,ट,पा,ट भने बढ्दै गएको छ।
विशेष गरी उपत्यकालाई आधार बनाएर चो,री, ड,,कै,ती र लु,ट,पा,ट गर्ने गिरोह सल्बलाउन थालेको छ।
क्लब हाउसमा हामीले विभिन्न सेयर ग्रुप भेट्न सक्छौ। यी ग्रुपमा सेयर विज्ञ तथा अनविज्ञ सबैले आफ्नो धारना तथा प्रश्न राखेको पाइन्छ। सेयर बजार प्रतिको लगाव बढ्दा क्लब हाउस जस्तो मञ्च मार्फत आफ्नो सेयर ज्ञान बाढ्न र सेयर बजारको भ्रम मेट्न सकिन्छ। साथै, नेपाली सेयर बजारका पोख्त लगानीकर्ता तथा विश्लेषकसँग नजिकैबाट सिक्न पाउने यो अवसर साना लगानीकर्ताको लागि धेरै नै ठुलो अवसर हो। तर के यो अवसरको राम्रो उपयोग भएको छ त?
जसले जस्तो सल्लाह दिएपनि कुनै नियमन नहुने हुँदा, यो सामाजिक सञ्जालमा जस्तो पनि प्रचार गर्न मिल्ने देखिएको छ। कुनै निश्चित स्टकलाई तोकेर स्टक किन्न प्रेरित गर्नु सरासर म्यानिपुलेसन नै हो । अचम्मको कुरा त के हो भने यस्ता रुमहरुमा सेयर बजारका अनुभवी मानिने लगानीकर्ताहरुले किन्ने र होल्ड गर्ने कुरा ठोकुवाका साथ भन्छन् भने बिक्रि गर्ने त कुरै हुँदैन । बजार बढेर आकाशिदा पनि स्टक तोकेर किन्न प्रेरित गर्ने, बजार खस्दा पनि किन्ने सहि समय हो, होल्ड गरौं भनेर भन्ने। यसरी मुल्य पम्प गरेर आफुले डम्प गर्ने उद्धेश्यले यस्ता गतिविधिको लागि उपयुक्त प्लेटफर्म बनेको छ क्लबहाउस । यदि कुन समयमा बेच्ने भनेर सहि सुचना दिन सकिदैन भने, के बेच्ने र होल्ड गर्ने भनेर प्रत्साहित गर्नु उचित हुन्छ त?
हो, क्लबहाउस ज्ञान आदानप्रदान गर्नलाई निकै सजिलो माध्यम भएको छ । तसर्थ, सबै रुमहरू म्यानिपुलेसन कै लागि बनाइएका हुन् भनेर भन्न मिल्दैन। तर श्रोताहरुले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर कस्ता कुराकानीमा सहभागी हुने र क्लबहाउसमा हुने छलफललाई आफ्नो लगानीको आधार बनाउने कि नबनाउने भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ।
नयाँ लगानीकर्ताले यसलाई सही सुझाव मान्छन् र सेयर खरिद गर्छन् । कहिले गर्ने त बिक्रि उसो भए? कि नयाँ लगानीकर्ताको भलाइ गर्ने निहुँमा ठुला लगानीकर्ताहरु मोटाको मोटाई गर्ने? तसर्थ, सेयरबजारमा लगानी गर्नको लागि नयाँ लगानीकर्ताले क्लबहाउसको गफ होइन आफ्नो जोखिमवहन क्षमताको आधारमा रणनिती बनाएर लगानी गर्नुपर्छ।
Last Updated on: October 1st, 2021 at 1:32 pm